मधेश : सम्भावनाको केन्द्र-संगीता रेग्मी – राजधानी खबर
मधेश : सम्भावनाको केन्द्र-संगीता रेग्मी
आज मधेश हरेक क्षेत्रमा पछि परेको छ र यसको मुख्य दोषी ठूला राजनीतिक दलहरू छन् । मधेशलाई बिगार्ने काम यी ठूलै दलबाट भएको हो । आज मधेश राजनीतिक दलहरूको खेल्ने मैदान भएको छ ।
इतिहासलाई हेर्ने हो भने मधेश एउटा शासित क्षेत्र हो । यहाँ सामन्तवाद, राजतन्त्र र जमीनदारहरूले शासन गरे । जनताको शासित मानसिकताका कारण यो क्षेत्रको उचित विकास हुन सकेन । जो शासक वर्ग थियो, त्यो मधेशका थिएनन । भएकै भए पनि साङ्केतिकमात्र थिए । यो क्षेत्र शासकहरूबाट शोषित रह्यो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अधिकारका विषय जुर्मुराएर बाहिर आए । जनतामा आफैबाट शासित हुनुपर्छ भन्ने भावना उजागर भयो । अहिले राज्यका हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक र समावेशी सहभागिताका कुराहरू तराई क्षेत्रलाई पहिल्यैदेखि गरिएको उपेक्षाको उपज हो । शासनको तहमा उनीहरूको सहभागिता पहिल्यैदेखि भएको भए त्यो माग आउने थिएन । परिणाम, सङ्घीयतासहितको संविधान आयो ।
देश अहिले तीन चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रवेश गरेको छ । यो निर्वाचन किन महत्वपूर्ण हो भने देशले पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास गर्र्र्दै प्रादेशिक सरकार बनाउँदैछ । संघीयता मधेशको देन हो भने मधेश आन्दोलनको उपज पनि हो । संघीयताले देशलाई विकासको मार्गमा डो¥याउनुका साथै जनताको हक र अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्छ भन्ने मान्यताका साथ मधेश यसका लागि लडेको हो ।
यसै सिद्धान्तको आधारमा विकासको नारा दिएर सबै दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू आफ्नो क्षेत्रमा चुनावी अभियान लिएर मतदातालाई आकर्षण गर्न जनताको घर दैलो पुगेका छन् । आफ्नो जीत सुनिश्चित भईसकेको आकंलन गर्दै उम्मेदवार घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन् । संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीचको चुनावी तालमेलले गर्दा विशेष गरी प्रदेश नम्बर २ मा चुनावी रौनक बढेको छ । मधेश आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु रहेको २ नम्बर प्रदेशमा राजपा र फोरमको गठबन्धनले आम जनतामा एक किसिमको उत्साह देखिएको छ भने यो गठबन्धनले बहुमत ल्याई प्रादेशिक सरकार निर्माण गर्ने आंकलन गरिदैछ ।
मधेशमा मधेश दलको सरकार निर्माणको सम्भावना रहे पनि उनीहरूको विकासप्रतिको नीति प्रष्ट छैन । मधेशको विकासको सवालमा मधेशी दलहरूको स्पष्ट रोडम्याप नहुँदा भोली मधेशको मार्ग कस्तो हुने, विकासको दृष्टिले मधेशलाई कसरी हेर्ने जस्ता आधारभूत विषयमा जनता अनभिज्ञ छन् ।
सङ्घीयताको मूल उद्देश्य विभिन्न तहबाट विकासको कार्यान्वयन होओस् भन्ने नै हो तर, जब विकास आफ्नो तहबाट गरिन थाल्छ, स्रोतको पहिचान र व्यवस्थापन पनि स्वतः हुन्छ । प्रश्न उठ्न सक्छ, के सङ्घीयता अभ्यासमा आउनेबित्तिकै मधेशको विकास हुन्छ त ? होइन भने अब विकासलाई गति दिन मधेशले के गर्नुपर्छ ? यस क्षेत्रका कमजोरी केके हुन् ? यस्ता प्रश्नको समुचित समाधानमा नै मधेशको विकासका अवरोधहरूको निकास पनि अन्तरनिहीत छ ।
२०६२÷६३ को मधेश आन्दोलनसँगै विभिन्न उद्देश्यले मधेशको नाममा राजनीतिक दलहरू खोलिए । नागरिकता, भाषा, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, समान अधिकार, पहिचान, संघीयता लगायतका माग राख्दै विभिन्न चरणमा आन्दोलन भइरहे तर अधिकारको आन्दोलनमा अगाडि बढिरहँदा विकासमको सवालमा मधेशी दलहरू पछाडि परिरहे । हुलाकी राजमार्ग निर्माण सुरू भएको १० वर्षभन्दा बढी समय भयो तर अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । यो विषयमा मधेशी दलहरूले खासै ध्यान दिएको पाईदैंन । समथर भू–भाग रहेको मधेशमा सडक निर्माणमा खासै समस्या रहँदैन । तर, जनकपुर, जलेश्वर, बर्दिबास, नवलपुर, चन्द्रनिगाहपुर, गौर लगायत मधेशका सदरमुकाम जोड्ने अधिकांश सडकको अवस्था जीर्ण रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई जस्ता विकासका सवालमा मधेशका जिल्लाहरू पछाडि पर्दै आएका छन् ।
राज्यले मधेशको विकासमा ध्यान दिएन, मधेशलाई सधैं हेपिरह्यो भन्ने गुनासो मधेश केन्द्रित दलहरूले गर्दै आएका छन् । तर, राज्यले जति बजेट विनियोजन गरेको छ त्यसको पनि सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । भ्रष्ट्राचार व्यापक छ । हरेक ठाउँमा कमिशनको खेल हुने गरेको छ । जति बजेट केन्द्रबाट विनियोजित भएर गएको छ त्यसको मात्र सही सदुपयोग गर्ने हो भने पनि मधेशमा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको अवस्थामा धेरै हदसम्म सुधार ल्याउन सकिन्छ । जनताको दैनिकीसँग जोडिएको विषयलाई मधेश केन्द्रित दलले बढी महत्व दिनुपर्ने हुन्छ । आफू केन्द्रमा बसेर मधेशीको अधिकारको विषयमा कुरा उठाउने तर आफ्ना मतदाताको समस्यामा ध्यान नदिनु मधेशी दलको कमजोरी हो ।
जति मधेशको नाममा राजनीति गरिन्छ त्यति मधेशको विकासमा ध्यान कसैको गएको छैन् । मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको लागि भोट माग्न आ–आफ्नो क्षेत्रमा पुगेका उम्मेदवारहरूले अबको दिनमा आफ्नो क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिन जरूरी छ । मतदातालाई आश्वासनभन्दा पनि परिणाम चाहिएको छ । मधेशी जनतालाई आन्दोलनका लागि मात्र प्रयोग गर्दै आएका मधेशी दलहरूले अबका दिनमा निर्वाचनमा भोट लिनको लागि मात्र प्रयोग नगरी विकासको एजेन्डालाई प्राथमिकतमा राख्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेशका समुदायबाट प्रभावशाली नेता आउन सकेनन् । राजनीतिले मधेशप्रतिको छवि परिवर्तन गर्नु जरूरी छ । मधेश भनेको खुला सिमानाका कारण अपराध, लागूऔषध, मानव बेचबिखनको मार्गजस्ता समस्याहरूमात्र होइन, सम्भावनाको केन्द्र पनि हो भन्ने मान्यता स्थापित हुनुपर्छ । यसमा राजनीतिको भूमिका बढी हुन्छ । त्यसैले मधेशबाट नेतृत्व गर्ने नेताले आफूलाई समयसापेक्ष अद्यावधिक गर्नु जरूरी छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
छुरा प्रहारबाट मृत्यु, अभियुक्तमध्ये एकजना पक्राउ
राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजको २६औं वार्षिकोत्सव
February 10, 2018 दिनेश कुमार बस्नेत Comments Off on राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजको २६औं वार्षिकोत्सव
December 21, 2017 दिनेश कुमार बस्नेत Comments Off on ढिकीजाँतो विदा गरी आधुनिक प्रविधिमा रमाउँदै भण्डारी दम्पती
December 21, 2017 दिनेश कुमार बस्नेत Comments Off on ‘खाडी मुलुकका घरेलु कामदारको सुरक्षामा गम्भीर हुन आवश्यक’
आमालाई २ तोला सुनको सिक्री बनाईदिन्छु भनेका खड्गबहादुर बाकसमा फर्किए
Left alliance wins both PA seats in Rukum east
सभापति देउवा र पौडेलकै प्रदेशमा कांग्रेसको पराजय: प्रतिनिधिसभातर्फ कहाँ-कति सिट ?